Shacabka reer Baladweyne oo mar-qura neefta ka soo fuqday, kadib markii war-farxad leh loo sheegay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Shacabka reer Baladweyne oo mar-qura neefta ka soo fuqday, kadib markii war-farxad...
Shacabka reer Baladweyne oo mar-qura neefta ka soo fuqday, kadib markii war-farxad leh loo sheegay!
Baladweyne (Halqaran.com) – Bulshaweynta ku nool magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa si diiran u soo dhaweeyay in markale magaaladaasi laga oggolaado isticmaalka lacagta kunka shilin ee Soomaaliga.
In muddo ah lagama isticmaalin kunka shilin magaalada Baladweyne, kadib markii ganacsatada ay ku sababeeyeen in lacago been abuur ah la soo geliyay magaalada, taasoo ay sheegeen inay sharci darro tahay adeegsigeeda.
Kulan ay Khamiistii yeesheen Maamulka Gobolka Hiiraan, kan degmada iyo ganacsatada reer Hiiraan ayaa waxay ka soo saareen farriinta ah in laga bilaabo 15-ka, bisha sideedaad ee sanadkan ay dadku wax ku iibsan karaan kunka shilin.
Cabdinuur Macallin oo ku hadlayay afka ganacsatada reer Hiiraan ayaa ku dhawaaqay in dadku wax ku kala iibsan karaan kunka shilin ee laga isticmaalo Gobolada Koonfurta, ee aan ahayn midka faalsada ah.
Cabdinuur Macallin ayaa Maamulka Gobolka Hiiraan ugu baaqay in tallaabo laga qaado dadka kunka been abuurka soo geliya Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Arrintan ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan Magaalada Baladweyne, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin go’aanka ay si wadajirka ahi u soo saareen Maamulka Gobolka iyo ganacsatada reer Hiiraan.
Cabdalla Muumin Barre oo ka mid ah bulshada ku nool Magaalada Baladweyne ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay in markale ay la jaanqaadaan shacabka kale ee ku dhaqan min Gedo illaa Galgaduud, iyadoo goboladaasi laga isticmaalo kunkii hore ee shilin Soomaaliga.
Wuxuu intaasi ku daray in dadka reer Baledweyne ay iminka dareemayaan in neef ay ka soo fuqday, islamarkaana ay ka mahadcelinayan in kunka shilin laga qaado xayiraaddii ay saareen ganacsatada.
Bulshada ku nool xaafadaha kala duwan ee Magaalada Baladweyne ayaa aad u hadalhaya warka ku aadan inay wax ku iibsan karaan kunka shilin.
ka soo fuqday
Shacabka reer Baladweyne
war farxad leh